IINGUBO ZOMTSHATO ZASETEMPERLEY ZASELONDON EZIVELA KWIVEKI YEFASHONI YOMTSHATO - IFASHONI
Eyona Ifashoni Jonga iilokhwe zomtshato zaseTempleyley zaseLondon ezisuka kwiVeki yeFashoni yomtshato
Jonga iilokhwe zomtshato zaseTempleyley zaseLondon ezisuka kwiVeki yeFashoni yomtshato
Nalu uqokelelo lwamva nje lomyili wokubetha iindlela zomtshato. Ukuhlaziywa ngo-Epreli 09, 2021
Ukuba ucwangcisa i-boho-luxe okanye umtshato ophefumlelweyo weediliya kwaye ujonge ilokhwe efanelekileyo yokutshatisa, sukujonga ngaphezulu Temperley London . Ifashoni kodwa engaphelelwa lixesha, ilokhwe yomtshato yaseTempley yaseLondon ibetha umlinganiso wokuhombisa okunobunewunewu kunye nobuhle obungakhathaliyo ngokubanzi. Okuthandwa ngabantu baseHollywood A-uluhlu kunye nosapho lwasebukhosini lwaseBritane, ingqokelela yeTempleyley yaseLondon idibanisa iinkcukacha zobufazi ngee-silhouettes zakudala zokuhambisa ubuhle obuphakamileyo obuveza ubukhazikhazi bexesha elidlulileyo.
Jonga zonke iimpahla zokunxiba ezivela kwingqokelela yeTempleyley yaseLondon ka-2022 engezantsi.
Izambatho Zomtshato zase-Temperley London zase-2022
Ngokunyanisekileyo kweTempleyley London
'I-Aurelie' ilokhwe enemikhono emide enekhola ephezulu kwaye yaqokelela imikhono kwi-lurex yesilika yase-Itali.
Ikholamu 'ye-Amelia' enentamo ephezulu kunye nemikhono emide kwintambo yeediliya.
'Ipoppy Ruffle Sleeve' enxibe impahla enemikhono enxibe ilokhwe enemilenze yesilika.
Ikholamu 'yeLiliana' enemikhono esikwe egxeni kunye neqhina lokubhinca esinqeni kwi-viscose ekhanyayo.
Isinxibo sika-'Juliette 'esingagxagxwanga esinomngxunya ongaphambili kwi-organza yesilika yase-Itali.
'I-Clemmie' ilokhwe enxitywe nge-bodice yokugoba kwi-crepe yase-Itali kunye ne-satin.
'I-Evangeline' ilokhwe ye-A-line enemikhono yebhaluni kunye neenkcukacha zokubuyisa umva kwi-tulle kunye ne-chiffon yesilika.
'Isla' ingubo emfutshane enemikhono enololiwe kwi-tulle ecekeceke yeentyatyambo.
'I-Gracelyn' ingubo ye-A-line, kunye ne-chiffon yesilika kunye ne-lace skirt.
Isinxibo somtshato sika-Mimi 'V-entanyeni esine-tulle enamachaphaza kunye neeruffles ezinamakhonkco anee sequins.
Isinxibo sika-'Nina 'kwi-lurex yase-Italiya.
'Ipoppy Long sleeve' enemikhono emide enemikhono kwi-tulle yesilika eprintiweyo.
'Luna' ingubo evulekileyo yangasemva eneblack tulle bodice kunye nesilika chiffon skirt kunye nemikhono.
Uhlobo loTyikityo lukaAlice Temperley
Umtshakazi waseTemperley waseLondon ngowona mfazi uphucukileyo wale mihla-othembekileyo, owasetyhini kunye nokuzithemba. UMtshakazi okwethutyana ukhupha ingqokelela emva kokuqokelelwa kokutya kule ndlela, esebenzisa amalaphu agqwesileyo kunye neenkcukacha ezigqityiweyo ngesandla (cinga: i-crystal appliques, iiglasi ze-bugle amaso, ii-sequins, iintyatyambo ze-organza ezenziwe ngobuqhetseba, kunye nokuhonjiswa kwe-chiffon). Ukuqwalaselwa kobushushu kwiinkcukacha kunye nobugcisa obungaqhelekanga abunakuthelekiswa nanto. Ngokuqhelekileyo iphefumlelwe ngothando lwentando ye-Old Hollywood Glamor kunye ne-Roaring Twenties, i-Temperley Bridal collections iqukethe i-iconic ye-silhouettes engapheliyo kunye ne-embellishments ezitsha kunye nezanamhlanje.
Imbali emfutshane yoMyili wengubo yoMtshato ka-Alice okwethutyana
Uzalelwe ngasekupheleni kwehlobo lowe-1975 eSomerset, eNgilane kwifama ye-cider yabazali bakhe, akukho mntu wayenokuqikelela ukuba uAlice Temperley uza kubizwa ngokuba ngumyili 'owenza amaza ngefashoni yaseBritane' yiVogue Magazine okanye xa kuthelekiswa nezinto ezithandwa nguRalph ULauren. Kuze kube yiminyaka yaseyunivesithi yaseTemperley kwiRoyal College yaseArt naseCentral St. Martins ukuba aqale ukuvelisa kunye nokuthengisa iimpahla. Emva kwenkulungwane, u-Alice Temperley wasungula umgca wakhe ongaziwayo u-Temperley London nje emva konyaka ephumelele. I-brand ibambe umboniso wayo wokuqala weLondon yeVenkile yeFashoni ngo-2003 kwaye ukusukela oko yaqhubeka nokukhula ekuthandeni.
U-Alice Temperley wamkelwe kwilizwe liphela kwaye ufumene amabhaso aliqela ngempumelelo yakhe kuyilo. Kunye nokuwongwa ngeMbasa eyi-Elle Magazine eBalaseleyo yoMyili oMncinci, uKumkanikazi uElizabeth uzukise uTemperley ngeBhaso laseBritane lokuGqwesa (elikwabizwa ngokuba yi-MBE) ngeenkonzo zakhe kumzi mveliso wefashoni ngo-2011.
izimvo zesikhumbuzo seminyaka emihlanu
Ukutsalwa bubukrelekrele bakhe, ayothusi into yokuba abantu babesweleka besazi ngakumbi ngembali kaAlice Temperly kunye neTempleyley yaseLondon. Incwadi yakhe yokuqala yeRizzoli, eyiBritane eyiyo, yabhalwa ngo-2011 kwaye yanika ingcaciso eneenkcukacha kwiminyaka eli-10 yokuqala yophawu lweTemperley London. Ukukhutshwa kwakutshanje, i-English Myths kunye ne-Legends, kunika umbono osondeleyo kuhambo lwegama kunye nokuziphendukela kwemvelo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Inamaphepha anomdla wokuhlela kunye neebhodi zemood ezivela kwiiqoqo zangaphambili ezinika abafundi ingqiqo ebonakalayo kwilizwe elinomtsalane laseTemperley London.
Ezinye iilebheli zeTemperley London
Phantsi kwesambrela seTemperley London, uAlice Temperely ukwasungule iilebhile ezimbini: 'I-Temperley Bridal' ngo-2006 kunye nentsebenziswano ephezulu no-John Lewis ebizwa ngokuba yi-'Somerset ngu-Alice Temperely 'ngo-2012, eyayiyintengiso yefashoni ekhawulezayo kwimbali yomthengisi.
Imbali yokuQokelelwa kweTempleyley yaseLondon
Ukulandela ukumiliselwa kohlobo ngo-2000, ubukhulu becala olwalunamaqela eefrock, iTemperley London iguqukele kwishishini laseBritani elaziwa kakhulu loyilo olunomtsalane olunamandla ongenakuthelekiswa nanto ngombono owomeleleyo, othembekileyo kunye nowasetyhini. Ivenkile yokugcina iflegi isandula ukufuduselwa kwisithili saseLondon posh Mayfair, kuhlala iTemperley London kunye neTemperley Bridal. Iziqwenga ziyafumaneka kwintengiso engaphezulu kwe-150 yabathengisi (kunye nokubala), kubandakanya uBergdorf Goodman kunye neeSelfridges zaseLondon.
Abafazi abaziwayo baseTemperley London
Uyilo luka-Alice Temperley lutsala abafazi bazo zonke iintlobo, kwaye yile ndlela kanye ayifunayo. I-Temperley London uluhlu olubanzi nolwahlukeneyo lwabathengi ababalulekileyo baquka ukuthandwa kweDuchess yaseCambridge kunye nodadewabo uPippa Midleton, uPenelope Cruz, uHalle Berry, uSarah Michelle Geller, uEva Mendez, kunye noPortia Freeman ukubala ezimbalwa. UAlice naye unxibe imvumi uKelly Clarkson, imodeli yaseArizona Muse, kunye nomlingisi uMillie Mackintosh kwiimpahla ezimangalisayo zomtshato zikaTemperley Bridal zosuku lwabo olukhethekileyo.
Iinkcukacha ezimnandi ngoAlice Temperley
Ukujonga imfashini njengendawo yokubaleka, unyaka nonyaka uAlice uphosa itheko lasehlotyeni kwidolophu yakowabo iSomerset kunye namakhulu abamenyiweyo abanxibe kakuhle (uninzi lwabo lubonakala eTemperley London lukhangeleka) ukonwabela ikhefu kwimihla ngemihla ngokutya okumnandi, ifashoni, nencoko.
I-Temperley yaseLondon Iqoqo leengubo zangaphambili zomtshato
I-Temperley London yokuwa kwe-2021 kweengubo zomtshato
'U-Aubrey' sheer omde onxibe ilokhwe enxibe intambo yomhombiso kunye nemibala enemibala yeentyatyambo.
Isinxibo se-A 'somgca we-A' ococekileyo onesinxibo esincinci kunye neenkcukacha zokugoba.
'I-Constance' enemikhono emide enxibe ilokhwe yentsimbi yentsimbi enobuhle, ehonjisiweyo kunye nokugquma okungaphezulu.
Ubhishophu 'waseGene' onxibe ilokhwe ephezulu yentsimbi yengubo kunye nokwandisa i-lattice beading kunye noyilo lwe-sequin.
'I-Ophelia' V-intamo yambatha ingubo ye-A eneepokotho kunye noololiwe abade.
'IPandora' i-V-neck halter ilokhwe yengubo.
Isinxibo se-'Pardus 'semikhono emide yokugubungela ngombala ogqunywe ngombala weentyatyambo onemibala.
'Iserayha' intamo ephezulu yentsimbi enxitywe ngengubo yentsimbi ene-beaded illusion efaka i-neckline kunye nomkhono wekepusi.
Isinxibo se-crepe sheath esine 'sleeve ngekotoni yesinqe seqhosha lesinqe.
'Bella' ukukhohlisa isithandwa senwele esineengubo zemikhono enemikhono emikhulu kunye nokuhombisa konke.
Isinxibo se-'Carnation 'epinki ye-tulle enebhodi enemibala yeentyatyambo kunye nemikhono evuthayo.
I-sequin 'yasezulwini' ifake ilokhwe enemikhono yekota ye-sequin kunye ne-chiffon slit skirt.
'Garance' ingubo ende yokugoqa isinxibo esine-neckline esongiweyo kunye ne-accent yesinqe esinqeni.
Isinxibo se-'Laelia 'esikhonkwane somkhono wengubo yesaladi eneentyatyambo ezisetyenzisiweyo kunye nesiketi esimdaka.
'IMarguaerite' V-yinqumle ilokhwe yomqala esinqeni kunye nesiketi esidlakadlaka kunye nomtya wesiketi.
'I-Bibi' inkohliso yekati yamehlo e-ballgown enemibala yeentyatyambo ezimibalabala kunye nesiketi esimiselweyo.
Isinxibo se 'Florette' sheath sheath esine-illusion neckline kunye ne-ruffle-hem enemikhono emide.
Ingubo yexilongo ye'Francesca 'engenamtya ongenamikhono enekhono lokukhohlisa intamo yomqala.
Isinxibo se-'Temperley 'semikhono ye-sheath enebhodi eboyiweyo, isiketi se-chiffon, kunye nokusika kwicala elingaphandle.
'Violetta' V-intamo ikholamu enxibe ilokhwe enemikhono erholayo, intambo-ntamo, kunye nelace esinqeni esisebenzayo.
'I-Rose' ifake i-lace jumpsuit kunye ne-halter lingerie straps kunye ne-neckline.
Ukujonga zonke iifriji zeVeki yezeMfashini, kunye neengcebiso malunga nelokhwe yomtshato kunye nokunye, yiya ku-lizapourunemerenbleus.org/bridal-fashion-week.
Ukwenza iKhabhinethi software simahla
yimalini ukutya ukutya komtshato
Sisiphi isandla esingumnwe
izimvo zebhodibhodi yanamhlanje